Apple icon ayaa sheeganeysa AirPods Max inuu yahay kii ugu xumaa ee uu isticmaalo muddo dheer | Waxaan ka socdaa mac
Mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee Apple in kastoo uusan ka shaqeyneynin Apple wali waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay dabeecad aad muhiim ugu ah nidaamka deegaanka ee tufaaxa qaniinay, wuxuu sameeyay hadalo kooban oo ku saabsan AirPods Max, aan dhahno wax yar oo muhiim ah. Waxaan dhihi karnaa in qofkani uu sabab u yahay (iyaga ka mid ah) xaaladda ay shirkaddu maanta ku sugan tahay. Taasi waa sababta ra'yigooda aad loogu dhagaysto heerka ganacsiga iyo heerka isticmaalaha. Dabeecadani waxay muujineysaa in AirPods Max "Waa aaladdii ugu xumeyd ee uu isticmaalo muddo dheer."
In kasta oo qofkani aanu ku xidhnayn Apple sidii hore, haddana waxaa loo tixgeliyaa taas fikradahoodu waxay qaadaan culeys aad u badan, gaar ahaan heerka isticmaalaha. Wuxuu weli yahay qof saameyn ku leh iibsadaha suurtagalka ah ee aaladaha Apple.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay hadalada aad sameysay Ku saabsan AirPods Max cusub oo ay dhowaan soo saartay Apple:
Waxba kama haysto Apple oo doonaysa inay ku dhawaaqdo sameecadeeda dhagaha qiimo aad u sareeya. Laakiin marka aad qarash gareyso lacagtaas waxaad filan kartaa tayo joogto ah. Markan Apple ma gaarin heerkii laga filayay tayada. Waa aaladdii ugu xumeyd ee aan isticmaalo muddo dheer. "
Dabeecadani waxay sheeganeysaa in AirPods Max ay yihiin kuwii ugu xumaa ee uu isticmaalo muddo dheer, waxay dhabar jab ku tahay Apple oo aanan ogaan doonin sida uu uga falcelin doono. Waxaan u qaadaneynaa taas Waxay qaadan doonaan farshaxan uu ku sameeyay bartamaha Apple Park iyo in qof kasta oo soo booqda uu arko isla marka uu galo. Naqshad sameynta oo uu sameeyay Jony Ive laftiisa.
Haddii aad rabto inaad ogaato qoraaga weedhahan oo aad u aqriso gabi ahaanba kuwii uu ku sameeyay warbaahintan, kaliya waa inaad gujisaa xiriiriyahan. Waxaan sugeynaa inaan aragno jawaabta uu na siinayo Tim Cook.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Astaamaha Apple ayaa sheeganaya in AirPods Max ay yihiin kuwii ugu xumaa ee uu isticmaalo muddo dheer